သင်ခန်းစာ (၃) လက်ထပ်ပြီးသည့်အထိ စောင့်ပါ။ – Myanmar Bible .Net
သင်ခန်းစာ (၃) လက်ထပ်ပြီးသည့်အထိ စောင့်ပါ။
Bible Handbook Home
လူများသည် သူတို့အတွက်အရေးပါသူတစ်စုံတစ်ဦး၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရရန် အလွန်အမင်း လိုအပ်ကြသည်။ ဤအချက်မှာ လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ပို၍မှန်ကန်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်ရှိသော သူတစ်ဦးနှင့် သိကျွမ်းရခြင်း က ပင်လျင် သင့်အားနွေးထွေးကောင်းမွန်သည့် ခံစားချက်မျိုးကိုပေးသည်။
ကောင်လေးနှင့်ကောင်မလေးတို့သည် တဦးကိုတဦးငြိသွားကြပြီးနောက်၊ အတူသွားလာကြသော အခါ၊ စိတ်လှုပ် ရှားမှုသည် ပို၍ကြီးထွားလာသည်။ တဦးကိုတဦးထိတွေ့၊ ယုယရခြင်းသည် မည်မျှပျော်ရွှင် ဖွယ်ကောင်းသည်ကို သိလာ ကြသည်။ ဤအရာက စိတ်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ များမကြာမီအချိန်တွင် နှစ်ဦးစလုံးသည် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်ရန် ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရပြီး သူတို့က ဤသို့တွေးလာကြသည်။ ““ငါတို့သည်တဦးကိုတဦး အမှန်တကယ်ချစ်တာပဲ။ လိင် ဆက်ဆံ တာက ဘာများမှားနေလို့လဲ။
လက်မထပ်မီ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်သက်မှုမပြုသင့်သည့်အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ ဤအချက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လက်မထပ်မီ လိင်ကြောင့် သင်ရရှိခဲ့သောအရာထက် လိင်ကြောင့် သင်ဆုံး ခဲ့သောအရာက ပိုမိုကြီးမား သည်။ လိင်ကြောင့် သင်ဘာကိုရသနည်း။ တိုတောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် တခဏတာပျော်ရွှင်မှု။ သို့သော် လက်မထပ် မီ လိင်ကြောင့် သင်ဆုံးရှုံးခံရသောအရာသည် သင့်တဘဝလုံး အပေါ်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
လက်ထပ်ပြီးသည်အထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းသင့်သည့် အကြောင်းအရင်းအချို့ကို လေ့လာကြပါစို့။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းက စစ်မှန်သောအချစ်ကိုသိနိုင်မည့် သင်၏အခွင့်အရေးများကို ဆုံးရှုံး စေနိုင်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် သူ၏လိင်ကိုပေးဆပ်ခြင်းအားဖြင့် အချစ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစာခြင်း (သို့) ထိန်းသိမ်းထားရန် ကြိုးစား ခြင်းသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် အမှားတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောအချစ်သည် စေ့စပ်ခြင်း၊ လက်ထပ် ခြင်း နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း လိင်က စစ်မှန်သောအချစ်ကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ စစ်မှန်သောအချစ်ကို သိနိုင်မည့် သင်၏အခွင့်အရေးများကိုပင်လျှင် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။
၁၉ နှစ် အရွယ်ကောင်မလေးသည် အထက်တန်းနှင့်ပထမနှစ် ကောလိပ်ကျောင်းသူ ဘဝတလျှောက်လုံးတွင် မိမိကိုယ်ကို သန့်စင်အောင် နေနိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည် သူမအလွန်နှစ်သက်သောကောင်လေးနှင့် ပုံမှန် ဘဝကို ဖြတ်သန်း နေခဲ့သည်။ သူသည် နွေရာသီအားလပ်ရက်ခရီးကို မထွက်ခွာမီ၊ သူမသည် သူ့ကို လိုက်လျောခဲ့သည်။ သူမက ဤသို့ တွေးခဲ့သည်။ ““ဘာကြောင့်မလုပ်ရမှာလဲ။ ငါက သူ့ကိုချစ်တယ်။ သူက လည်း ငါ့ကိုချစ်တယ်။””
ဘာဆက်ဖြစ်သနည်း။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကာလတွင် သူမသည်သူမ၏ “ချစ်သူ” ထံမှ ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့ပါ။ နွေဦးကာလ၌ သူပြန်လာသောအခါ သူမသည် သူမအား စစ်မှန်သောအချစ်ဖြင့် မချစ်သောသူကို သူမ၏ အဖိုးထိုက်သည့်အရာကို သွေးဆောင်ခံရသောကြောင့် ပေးလိုက်ရပြီး ဆိုတာကို သိရှိခဲ့သည်။ သူက ““ငါတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး ညဟာ တကယ့်ကိုအိပ်မက်ဆိုးကြီးပါပဲ။ အဲဒါပြီးနောက် ငါမင်းကို ဘယ်တော့မှလက်မထပ်တော့ဘူး။”” ဟူ၍ပြောခဲ့သည်။
လက်မထပ် မီဆက်ဆံခြင်းက ဘုရားသခင်က သင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသော အကောင်းဆုံးအရာ ကို ဘယ် တော့ မှ မသိနိုင်အောင် သင့်ကိုတားဆီးလိမ့်မည်။
လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောယူဆချက်တစ်ခုမှာ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓာပိုင်းပျော်ရွှင်မှုသာ ဖြစ်ပြီး သင့် စိတ်ကြိုက် မည်သူနှင့်မဆို လုပ်နိုင်သည်ဟူသော ယူဆချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ယူဆခြင်းက လိင်ကိုဈေးပေါစေပြီး အဓိပ္ပါယ်မဲ့စေပြီး ကျွနု်ပ်တို့အား ဖန်ဆင်းထားသည့်ပုံစံကိုပင် ပမာမခန့်ပြုသည်။
လိင်သည် ခန္ဓာပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်အခြားသူသည် တသား တကိုယ်တည်းဖြစ်သွားသည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် အလွန်ရင်းနှီးကပ်ငြိသည့်အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏ တစိတ်တပိုင်းသည် ထိုသူနှင့်အတူ ထာဝရကာလ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် လက်ထပ်သောအခါ သင်၏ဘ၀ အဖော် ကို ၁၀၀% အပြည့်မပေးနိုင်တော့သည်ကို သိလာလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ သင်၏တစိတ် တပိုင်း ကို အခြားသူတို့အား ဝေမျှပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို အရေးမပါသလို ပြုမူခြင်းသည် မိုက်မဲရုံသာမက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း လျစ်လျူရှုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းက သင်၏မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားသောစိတ်ကို ထိခိုက်စေသည်။
ကျမ်းစာက လူငယ်တစ်ဦးသည် သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို ဂုဏ်အသေရေရှိစွာဖြင့် စောင့်ထိန်းသင့်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းသော သူတို့၏လမ်းစဉ်ကို မလိုက်ကြရန်ပြောထားသည်။ လူငယ် တဦး၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု သည် သူ (သို့) သူမ၏ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်း စွာပင်၊ အများစုသည် အရမ်းနောက်ကျမှသာ ဤအချက်ကိုနားလည်လာကြသည်။ တခါတရံ မိန်းကလေး တဦးသည် အချစ်ကိုအလွန်ဆာလောင်သဖြင့် ယောကျ်ား တဦး၏လိင်စိတ်ဆန္ဒကို သူမရှာဖွေနေသောအချစ် ဟု ထင်ကာ ထိုယောကျ်ား၏ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးတတ်ကြသည်။ မကြာခဏ၊ ထိုယောကျ်ားသည်သူမကို အမှန်တကယ်မချစ် မလေးစားသည်ကိုတွေ့ရတတ်သည်။ သူလိုချင်သောအရာမှာ လိင်သာဖြစ်ပြီး သူမကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေသဖြင့် သူမကိုအသုံးချကာ သူလိုချင်သောအရာကို ရယူလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ခဏကြာသောအခါ သူသည် သူမကိုငြီးငွေ့လာပြီး၊ သူမသည် ဈေးအဆမတန်လျော့ထားသောကုန်ပစ္စည်း ကဲ့သို့ဖြစ်လာတော့သည်။ အချစ်ကိုရှာဖွေရန်အတွက် သွားစရာနေရာ သူမတွင်မရှိတော့ပဲ လိင်ကိုရှာဖွေ နေသောသူ ထံသို့သာ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ သူမသည် သူမ၏မျက်စိ၌ပင် ဈေးပေါနေပြီး အခြားသူများက လည်း သူမအား ဈေးပေါ သည် ဟု မြင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် တစ်ဘဝစာအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သင့်အားသြတ္တပ္ပစိတ်ကိုပေးထားပြီး ထိုစိတ်ဖြင့်အသက်ရှင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်မိန်းမတစ်ဦးက “လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တခဏတာ ပျော်ရွှင် မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤသို့လုပ်ခြင်းက တန်ပါရဲ့လား” ဟုရေးခဲ့သည်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။
လူငယ်အများစုက လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်း၍ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်ဟု မြင်ပါ သလား။ အဖြေမှာ “NO” ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်တစ်ရပ်ကို လက်မထပ် ရသေး သည့် မိခင်များအတွက် ဆေးခန်းကြီးတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းအား လက်မထပ်ရသေးသည့်အမေများကို မေးခဲ့သည်။ “လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကို သင်ကပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသည်ဟုမြင်ပါသလား (သို့) စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းသည်ဟုမြင်ပါသလား (သို့) မနှစ်မြို့ဖွယ် ကောင်းသည်ဟုမြင်ပါသလား။ ၄င်တို့ထဲမှ ၅၀% က ဤအတွေ့ အကြုံသည် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ဖြေခဲ့ပြီး ၃၀% ကမနှစ်မြို့ဖွယ်၊ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်ဟုဖြေခဲ့သည်။ ၂၀% ကသာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်း သည်ဟုဖြေခဲ့သည်။ မှန်ကန်သော အခြေအနေတစ်ရပ်၌ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ဘုရားသခင် ရည်ရွယ် ထားသလိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အိမ်ထောင်ရေးအပြင် ဘက်၌ လုပ်လျှင်မူ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ၁၆ နှစ်အရွယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းလေးက ဤသို့ ရှင်းလင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ အချစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေ၊ တီဗီ တွေထဲမှာ သင်တွေ့မြင်တာ မှန်သမျှဟာ အလိမ်အညာ တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ၊ တီဗီ တွေထဲကအချစ်ဟာ မနူးညံ့၊ မချိုသာ သလို ကြာရှည်မခံပါဘူး။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး နာကျင်စေပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲက လူတွေဟာ အိပ်ယာပေါ်ခုန်တက်ကြပြီး အရာအားလုံးဟာ အားကျဖွယ် ကောင်း တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ နောက်တနေ့ မနက်မှာလည်း လူတိုင်းဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နိုးထလာပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကျတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သာ ကျင့်သားမရသေးရင်၊ အဲဒီအရာဟာ ဆိုးဝါးစွာနာကျင်စေပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက၊ နောက်တနေ့ မနက်မှာ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ကိုကြည့်တောင်မကြည့်တော့ပါဘူး။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် သင့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။
လက်မထပ်မီ လိင်ပိုင်းကိစ္စများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းအားဖြင့် လိင်မှကူးစက်တတ်သောရောဂါများကို သင်၌ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လွယ်သောမိန်းကလေးများ၊ တနည်းအားဖြင့် ပြည့်တန်ဆာများသည် ပြင်း ထန်သော ထိုရောဂါ တစ်ခုခု၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ယောကျ်ားများသည်လည်း “ရောဂါသယ်ဆောင်သူ” များဖြစ်နိုင် ပါသည်။ လိင်မှ တဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများသည် ပြင်းထန်သော ပိုးဝင်မှုများ၊ မျက်စိကန်းခြင်းများနှင့် သေခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤပြင်းထန်သောရောဂါများသည် သင့်ကလေးများကိုပင်လျှင် ကူးစက်နိုင်သည်။ ဤရောဂါများထဲမှ အချို့ကို ကုသ၍ မရနိုင် သေးပါ။
ယောကျ်ားတစ်ဦးတည်းနှင့်သာ ဆက်ဆံမှုပြုသောကောင်မလေးတစ်ဦးက သူ့ကိုသူ လုံခြုံသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်က သူမသည်လည်း ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံနေရပြီးဆိုတာကို ပြောသောအခါ၊ သူမသည် အလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့သည်။ ထိုဗိုင်းရပ်၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေကြသောအခါ၊ သူမ၏ဆက်ဆံဖက် ယောကျ်ားမှာ အခြားမိန်းကလေးတဦးတည်းနှင့်သာ ဆက်ဆံသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် ထိုမိန်းကလေးသည် အခြားယောကျ်ားငါးဦးနှင့်ဆက်ဆံပြီး ဤယောကျ်ားငါးဦးက ပြည့်တန်ဆာများအပါအဝင် အခြား မိန်းမ ၁၉ ယောက်နှင့်ဆက်ဆံသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယောကျ်ားတစ်ဦး တည်း နှင့်သာ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနေသည်ဟု ထင်ခဲ့သောကောင်မလေးသည် နောက်ဆုံး၌လူပေါင်း ၉၂ ဦးနှင့် သူမဆက် နွယ်နေကြောင်းကို သိသွားခဲ့သည်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ဘဝကို တစ်စစီ ကြေကွဲသွားစေနိုင်သည်။
အိမ်ထောင်ရေးအပြင်ဘက်၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကို ပြုကြသောလူငယ်များသည် ဤမေးခွန်းအား မိမိ ကိုယ်ကို မေးသင့်သည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ရှိလာမယ်ဆိုရင် ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဤသို့လည်း မေးသင့်သည်။ ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။
လက်မထပ်ရသေးသည့်မိခင်များအတွက် ဆောက်လုပ်ပေးထားသောအိမ်သို့ အလည်အပတ်သွားခဲ့ သူတဦးက ““သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို မသိကြတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်ထင်ဟပ်နေ တဲ့ စိတ်ပျက်၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုတွေကို သင်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကို သူတို့သိကျွမ်းခွင့်ရမှ ရပါ့ မလား၊ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ကို အနာဂတ်မှာရမှရပါ့မလား ဆိုတာကို မသိတော့တဲ့ကောင်မလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်သောမိန်းကလေးမျာသာမက ကောင်းသောမိန်းကလေးများသည်လည်း ကိုယ်ဝန်ရလာနိုင်ပါသည်။ ဖျက် ချခြင်းအားဖြင့် အလိုမရှိသောကိုယ်ဝန်ကိစ္စကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် မှန်ကန်သောနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ။ သင်မမွေး ရသေး သော ကလေးငယ်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် မိမိ၌အပြစ်ရှိသည် ဟုဆိုးဝါးသည့် ခံစားချက်မျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဆိုး ဝါးသည့်ခံစားချက်က သင့်ဘဝတလျှောက်လုံး၌ သင့်အား ခြောက် လှန့်နေမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါစာက ကျွန်တော်တို့ နှင့် ရင်းနှီးပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြ သည်။
ကျွန်မမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မဟာ ၁၈ နှစ်သာရှိပြီး ကောလိပ်တက် ဖို့ နှစ်လပဲ လို ပါ တော့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ကောင်လေးဟာ ကျွန်မကဲ့သို့ အမည်ခံ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက် ချဖို့နှစ်ဦးလုံးက ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုမရင်ဆိုင်ရဲတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အလွယ်နည်း ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးနောက် ကျွန်မဟာစိတ်ပိုင်းနာကျင်မှုကို အလူးအလဲခံရပြီး၊ မျက်ရည်များစွာ စီးကျခဲ့ပြီး ကျွန်မ တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုံးကို နောင်တရခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့တိုင်အောင် ကျွန်မဟာ ဒူးထောက်ပြီး ငိုယိုကာ၊ ကျွန်မအား ကြင်နာသနားစွာဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ဘုရားသခင်ထံတောင်းဆိုဆဲပါ။ ကျွန်မဟာ အရမ်းကိုမှားခဲ့တယ်လေ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်မကိုနောက်ထပ် ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေး ပေးဦးမလားဆိုတာကို တွေးတောဆဲပါ။ သူဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဘုရား ဖြစ်တာကိုသိပြီး သူဟာ ဘုရားသခင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ ကျွန်မမှာအပြစ်ရှိ တယ်လို့ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ကိုပွေ့ဖက်ရင်း ဆက်လက်အသက်ရှင်ဆဲပါ။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် ကြီးမားသောပြဿနာအချို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ယောကျ်ားတစ်ဦးက ““မင်းကိုယ်ဝန်ရှိလာရင် မင်းနဲ့ငါလက်ထပ်မယ်။”” ဟုပြောလေ့ ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရေးသည် အလေးအနက်ထားရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ဖို့မပြင်ဆင်ရသေးသည့် အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ဖို့ မကြိုးစားသင့်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေး၌ လရောင်၊ ချစ်ရည်လူးမှုများနှင့် နှင်းဆီပန်းများ အားဖြင့်သာ ပြည့်နှက်နေမည်မဟုတ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေး၌ နေ့အလင်းရောင်၊ လသားအရွယ်ဝတ်ဘောင်းဘီ များနှင့် ဟင်းခွက်ပန်းကန်များလည်း ပါဝင်သည်။ ဤစာကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
ကျွန်မအသက် ၁၇ နှစ်ရောက်တော့၊ ကျွန်မရဲ့ဘဝဟာရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါပြီ။ Ted နဲ့ကျွန်မ ၆လကြာ ပုံမှန် တွဲခဲ့ ကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မတို့လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာတွေကို စလုပ်လာကြပြီး ကျွန်မမှာကိုယ်ဝန် ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ဦးလုံး ဟာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ဘ၀ ကိုမုန်းတီးပြီး Ted အပေါ်မှာ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့ တာတွေ အတွက်လည်း မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခဲ့တယ်။ ကလေးက တချိန်လုံးငိုပြီး Ted ကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တယ်။ သူဟာ အရက်ကို အလွန် အကျွံသောက်ပေမယ့် ကျွန်မသူ့ကို အပြစ်မတင်နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ဟာ အမှိုက်ပုံနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာနေပြီး ကလေးထိန်းခေါ်ဖို့၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစား ဝယ်ဖို့တောင် ကျွန်မတို့မှာပိုက်ဆံမရှိပါဘူး။ Ted က ဘာမှမပြောပေမယ့်၊ သူကျွန်မကို မုန်းတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ သိပါတယ်။ ကလေးကိုလည်း သူမုန်းပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ အိပ်မက်ဆိုး တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး မနက်မိုးလင်းချိန်မှာ ကျွန်မအိမ်ရဲ့ အိပ်ယာထဲမှာ ကျွန်မဟာနိုးထပြီး ကျွန်မနဲ့အလွန်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းကိုအတူသွားရမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုးနေ့တွေဟာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကို ကျွန်မ သေချာ သိပါတယ်။
ကျွန်မ ဒီစာကိုရေးခြင်းမှာ အကြံဉာဏ်ရယူလိုတာကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မလိုမျိုး မိမိဟာအားလုံး ကိုသိပါတယ် လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ သင်ခန်းစာ၊ အကျိုးအမြတ်ရပါစေ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီစာကို ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် သင်နှင့်မသင့်တော်သောသူကို လက်ထပ်မိစေရန် သင့်အားလှည့် စားမည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယှက်နွယ်မှုရှိနေပါက၊ သင့်ကိုသင် အချစ်စစ်ကို တွေ့သွားပြီး ဟု ထင် လိမ့် မည်။ အမှန်မှာ သင်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ခံစားချက်များကိုသာ ရရှိ နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ရှေ့တဆင့်တက်ပြီး ထိုသူနှင့်လက်ထပ်ပြီးမှ သင့်အတွက်မှားယွင်းသောလူကို လက်ထပ်မိ မှန်း သိလာလိမ့်မည်။ သင်နှင့်သူကြားတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုသာရှိပြီး အချစ်စစ်မရှိကြောင်းကို အလွန် နောက် ကျပြီးမှ သင် သိနိုင်သည်။
လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် သင်၏အိမ်ထောင်ရေးဘဝကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။
လူအချို့က သူတို့သာ လက်ထပ်လိုက်ပါက၊ အရာအားလုံးဟာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မည် ဟုထင်ကြသည်။ အမှန် မှာ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့သည် သင်တို့နှစ်ဦးအတွက် အကောင်းဆုံး အနေအထားတွင် ရှိနေ တာ တောင်မှ သာယာပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ရေးကို လွယ်ကူစွာမရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်တို့သာ အစမှားခဲ့ပါက၊ ထိုသို့သော အိမ်ထောင်ရေးကို ရရှိရန်ကြိုးစားရာတွင်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် အောင်မြင်သောအိမ်ထောင်ရေးကို ရနိုင်မည့်သင်၏အခွင့်အရေးများကို အလွန် အမင်း လျော့နည်းစေသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းမရှိ သူသည် လက်ထပ်ပြီးသော အခါ တွင်လည်း ဆက်လက်၍ စည်းကမ်းမဲ့စွာ ပြုမူနေထိုင်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘယ်တော့မှ ကျေနပ် ရောင့်ရဲမှုမရှိတတ်ဘဲ အသစ်သော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရာများ ကို ဆက်လက်ရှာဖွေတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တခါတရံ လက်မထပ်မီ လိင်ပိုင်းအရ စည်းမစောင့်သူနှစ်ဦးသည် လက်ထပ်ပြီးသောအခါ အဆင်ပြေစွာ ပေါင်း သင်း နေထိုင်ကြသည်ဟု ထင်ရသည်။ သို့သော် သူတို့နှစ်ဦးသည် သံသယနှင့်မယုံကြည်မှု ဟူသောမျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုး ထား ကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုမျိုးစေ့တို့က ခါးသီးသောအသီးကို သီးစေလိမ့် မည်ဖြစ်သည်။
နှစ် ၂၀ ကြာအိမ်ထောင်သက်တမ်းရှိသူနှစ်ဦးသည် သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးအား မပြိုကွဲစေရန်အတွက် ဒေါက်တာ ဟင်နရီနှင့် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယောကျ်ားဖြစ်သူက ““ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို မယုံဘူးဗျ”” ဟုပြောပြီး မိန်းမဖြစ်သူက ““ရှင်ကလည်း ကျွန်မကိုမယုံပါဘူး”” ဟူ၍ပြန်လည် ချေပသည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တဦးနှင့်တဦး ဘာကြောင့် မယုံကြသနည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းကြောင့် သံသယစိတ်နှင့် မယုံကြည်မှုသည် နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်၌ နှစ်၂၀ ကြာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး၌ သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကို ပင် ပျက်စီးစေခဲ့သည်။
လက်မထပ်မီ ဘာကြောင့်လိင်မဆက်ဆံသင့်ကြောင်း အကြောင်းပြချက် (၁၀)ချက်ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤ ၁၀ ချက်စလုံးထက် အရေးကြီးသောအကြောင်းပြချက် တစ်ချက် ကျန်ပါသေးသည်။ ၎င်းမှာ ဤသို့လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဆိုသောအချက်ပင် ဖြစ်သည်။
မှားယွင်းရခြင်းအကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်က ဤသို့ဆက်ဆံခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟုပြောထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘယ်အရာကမှ ထိုအချက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် အပြစ် ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရေးအပြင်ဘက်၌ လိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်ကပြောထားသည်။ လက်မထပ်ရသေးသော သူနှစ်ဦးဆက်ဆံခြင်းသည် မတရားသော မေထုန်ကိုမှီဝဲခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး အပျက်အစီးများစွာ ဖြစ်စေသော အပြစ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““မတရားသောမေထုန်ကို ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။ မတရားသော မေထုန်ကို ပြုသောသူမူကား၊ မိမိကိုယ်ပင် ပြစ်မှား၏။”” ဟုဆိုသည်။ (၁ကော ၆း၁၈)
ဘုရားသခင်က အိမ်ထောင်ရေးအပြင်ဘက်၌ သာမန် (သို့) သွေဖယ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးသည် အပြစ် ဖြစ်သည်ဟုပြောထားသည်။ လူများက အချိန်တွေကပြောင်းသွားပြီ ဟူ၍ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က မပြောင်းလဲပဲ ဤအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူ၏စိတ်တော်မှာလည်း မပြောင်းလဲပါ။ ကျမ်းစာက ““ခပ်သိမ်းသောသူတို့၌ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့် သစ္စာသံဝါသပြုခြင်းအမှုသည် အသရေရှိ စေလော့။ မတရားသောမေထုန်ကိုပြုသောသူနှင့် သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူကို ဘုရားသခင်စစ်ကြော စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။”” ဟုဆိုသည်။ (ဟေဗြဲ ၁၃း၄“) ထပ်မံ၍ ကျမ်းစာက ““အယူမလွဲကြနှင့်။ မတရား သောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူ၊ သူ့မယားကို ပြစ်မှားသော သူ၊ ယောကျ်ားချင်းမေထုန် ကိုပြုသောသူ၊ …တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရကြ။”” ဟုဆိုသည်။ (၁ကော ၆း၉-၁၀)
ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အား အကောင်းဆုံးအရာများကိုသာ ရစေလိုသည်။
လူငယ်အများစုသည် ဘုရားသခင်က လက်မထပ်မီ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၌ ဘာကြောင့်သူတို့အား မပါဝင် မပတ်သက်စေလိုသည်ကို နားမလည်ကြပေ။ အချို့မှာ ဘုရားသခင်က သူတို့အားလိင်ကိစ္စ၌ ဝမ်းမမြောက်စေလိုသော ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ အမှန်မှာ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
ဤအချက်ကို ဥပမာပေး၍ရှင်းလင်းဖော်ပြပါမည်။ ရထားတွေအကြောင်းတွေးကြည့်ကြပါစို့။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမြန်ဆုံး ရထားအချို့သည် ဂျပန်တွင်ရှိသည်။ ဤရထားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၁၂၀ နှုန်းဖြင့် ပြေးဆွဲပြီး တခါတရံတွင် ၁၅၅ နှုန်းသို့ပင် ရောက်သွားတတ်သည်။
ဤရထားများသည် ဤသို့သောအမြန်နှုန်းကို မည်သို့ရရှိသနည်း။ အကြောင်းမှာ ဤရထားများသည် အကောင်း ဆုံး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်စွာတည်ဆောင်ထားသော ပြေးလမ်းများအပေါ်တွင် ပြေးဆွဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပြေးလမ်းများက ရထား၏အမြန်ဆုံးနှုန်းကို ရရှိစေသည်။ ဤရထားများ ထဲမှ တစ်စီးက ဤသို့ပြောသည်ဆိုပါစို့။ ““ဒီဟောင်းနေတဲ့ပြေးလမ်းတွေပေါ်မှာ ပြေးဆွဲရတာ ငါစိတ်ကုန် နေပြီ။ အကန့်အသတ်တွေများလွန်းတယ်။ ငါသွားချင်တဲ့ နေရာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပြီး ငါလုပ်ချင် တာကိုလုပ်မယ်။ ထိုကြောင့် ဤရထားသည် ပြေးလမ်းပေါ်မှခုန်ထွက်ပြီး စပါးခင်းတစ်ခုပေါ်သို့ ရောက် သွားခဲ့သည်။
ယခုတွင် ဤရထားသည် လုံးဝလွတ်လပ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ပြေးလမ်းများ၏ ဝန်းရံထားခြင်းကို မခံရတော့ပါ။ ဤရထားသည် အမှန်တကယ်လွတ်လပ်သွားသော်လည်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၁၂၀ နှုန်းဖြင့် မပြေးဆွဲတော့ပါ။ အမှန်မှာ ရွေ့ပင်မရွေ့တော့ပဲ ရွှံနွံထဲ၌သာ နစ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဤရထားထက် အင်အားကြီးမားသောအရာတစ်ခုက ဤရထားကို လာမ၍ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပြီး ပြေးလမ်းပေါ်တွင် ပြန်တင်ပေးမှသာ ဤရထားသည် အရင်ကဲ့သို့ ပြန်လည် ပြေးဆွဲ နိုင် မည် ဖြစ်သည်။
လိင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ““ပြေးလမ်း””များကို စီမံ ထား ပေး ရခြင်းမှာ သင့်အားလိင်မှုကိစ္စ၌ ဝမ်းမမြောက်စေရန်မဟုတ်ဘဲ သင်သည် သင့်အိမ်ထောင်ရေး၌ လိင်မှုကိစ္စကို အချိန် ကြာရှည်စွာ အပြည့်အ၀၀မ်းမြောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာတန်က ““ပြေးလမ်းပေါ်မှ ခုန်ဆင်းခြင်း””ဆိုသည့် စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကို သင့်အားကမ်းလှမ်းထားသည်။ သို့သော် သင်သည်နွံထဲသို့ ရောက်သွားလိမ့်မည်။
သင့်အားလက်ထပ်စေရန် ဘုရားသခင်အစီအစဉ်ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်ထဲ၌ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်လက်ထပ်သောနေ့တွင် ရှေ့၌ ကျမ်းသစ္စာကိုကျိန်ဆိုရန် အတွက် ဘုရားကျောင်းထဲသို့ လမ်းလျှောက်ဝင်သောအခါ၊ သင့်ကိုသင် သန့်ရှင်းစေခဲ့ခြင်းအတွက် သင်သည် ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။
ဤအရာကိုဖတ်နေသောသူတစ်ဦးက ““ကျွန်မတော့ ပြေးလမ်းပေါ်မှ ခုန်ဆင်းခဲ့ပြီးပြီ။ ကျွန်မ အတွက် မျှော်လင့် ချက် များ ရှိသေးသလား?
သင့်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါသေးသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်ကိုရွံ့ထဲမှ ကောက်ယူကာ သန့်ရှင်းစေပြီး ပြေးလမ်းအပေါ်သို့ ပြန်လည်တင်ပေးနိုင်သည်။
တစ်ကြိမ်တွင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အချို့သည် ယေရှုအားအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြားမှု ကျူးလွန်သော မိန်းမတဦးကို အထံသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ထိုမိန်းမကို ခရစ်တော်၏ ခြေထောက်နား သို့ တွန်းလိုက်ပြီး ““ဆရာ၊ ဒီမိန်းမဟာ ဖောက်ပြားမှုကျူးလွန်နေစဉ်၌ပင်၊သူ့အားလက်ရဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ပညတ်တော်ထဲ၌ မောရှေက ဒီလိုမိန်းမကို ကျောက်ခဲနဲ့အသေပစ်သတ်ရမယ်လို့ မိန့်မှာထားပါတယ်။ သခင်ကရော ဘာပြောစရာရှိပါသလဲ?ဟု ပြောကြသည်။
ဤလူများသည် ထိုမိန်းမကို ဂရုမစိုက်ကြပါ။ သူတို့သည် ထိုမိန်းမကိုအသုံးပြု၍ ခရစ်တော်အား ချောက်တွန်း လိုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုက ““သူမကိုမပစ်သတ်ရ။””ဟု ပြောပါက၊ မောရှေ၏ပညတ်တော် များကို ဆန့်ကျင်နေသလို ဖြစ်ပေမည်။ အကယ်၍သူက ““အသေသတ်လိုက်””ဟု ပြောပါက၊ ရောမအစိုးရနှင့် ပြသနာတက်နိုင်သည်။
ယေရှုသည်သူတို့၏မေးခွန်းကိုချက်ချင်းမဖြေပါ။ သူသည်ဒူးထောက်လိုက်ပြီး သဲပေါ်တွင် စာရေးနေ ခဲ့သည်။ ဤ လူများက ယေရှုအား ဖြေကြားရန်အတင်းအကြပ်တောင်းဆိုသောအခါ သူသည် ထပြီး ““သင်တို့ထဲမှာ အပြစ်မရှိတဲ့ သူ က ပထမဆံ့ုးကျောက်ခဲဖြင့် စပြီး ပစ်စေ””ဟု ဆိုခဲ့သည်။
သူပြောတာကိုကြားသောသူများသည် မိမိတို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်က မိမိတို့ကို အပြစ်ရှိသည်ဟု စီရင်သောကြောင့် သူတို့သည် တဦးပြီးတဦး ထွက်သွားကြသည်။ ယေရှုသည် ထိုမိန်းမကို အပြစ်လွှတ်ပေးပြီးနောက် ““သွားလော့၊ နောက် ထပ် အပြစ်မလုပ်နဲတော့ဟု”ဆိုခဲ့သည်။
ခရစ်တော်သည် သင့်အား အပြစ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
ယေရှုသည် သင့်အားအပြစ်လွှတ်ပေးလိုပြီး ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ သင့်အားသန့်ရှင်းစေလိုသည်။ သင်၏ အပြစ်များသည် လွှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက် ကားတိုင်ထက်၌ အဖိုးထိုက်သောသွေးတော်ကို သွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ က ““….ယေရှုခရစ်တော်၏ အသွေးတော်သည်၊ ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏””ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၁း၇
ခရစ်တော်ထံသို့ လာရန်အတွက် သင်ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါ။ သူသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းအမှုကို ကျူးလွန်သော မိန်းမအား အပြစ်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည် အပြစ်သားများ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး သူ့ဆီသို့လာရန် အတွက် သင့်အား ဖိတ်ခေါ် လျှက်ရှိသည်။ သူက ““ငါ့ထံသို့လာသောသူကို ငါအလျှင်းမပယ်””ဟုဆိုခဲ့သည်။ ယော ၆း၃၇
သင်လုပ်ရမည့်အပိုင်းမှာ သူဆီသို့လာရန်ဖြစ်ပြီး သူကသင့်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ သူသည်သင်၏ အပြစ်များအတွက် သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ရုံသာမက၊ သင့်အားချည်နှောင်ထားသော မည်သည့်အပြစ်ကိုမဆိုပင် ဖြေလွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ယေရှုက ““သားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လျှင် သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်လွှတ်ကြလိမ့် မည်””ဟုဆိုသည်။ ယော ၈း၃၆
သင်သည် ဤသို့လွတ်မြောက်လိုပါက၊ သခင်နှင့် နှစ်ယောက်တည်း မိတ်သဟာယဖွဲ့ပါ။ သင်၏ အပြစ်များအား သူ့ကိုပြောပြပါ။ အားလုံးကို ပြောပြပါ။ သင်သည် ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ထက်၌ အသေခံခဲ့သော သူ့အား ကျေးဇူးတင်ပါ။ သင့်အတွက် သွန်းခဲ့သောသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အား စင်ကြယ်စေရန် သူ့အားတောင်းဆိုပါ။
ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုယူပြီး ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကို စဖတ်ပါ။ ဖတ်နေစဉ်၊ ““ယုံကြည်သည်”” ဟူသော စကားလုံးကို မျဉ်းတားထားပါ။ အောက်ပါကျမ်းပုဒ်များအား အထူးသဖြင့် မှတ်သားပါ။ ယော ၃း၁၆-၁၈၊ ယော ၁း၁၀-၁၂၊ ယော ၃း၃၅၊ ၃၆ ၊ ယော ၅း၂၄၊ ယော ၈း၃၆ ၊ ယော ၂၀ – ၃၁။
သင်၏နာမည်ကို ဤကျမ်းပုဒ်ထဲရှိ ကွက်လပ်ထဲသို့ထည့်ဖတ်ပါ။ ““သားတော်ကို ယုံကြည်သော ——–သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ ထာဝရဘုရားအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် ————ကိုချစ်တော်မူ၏””
သင့်နာမည်ကို ကွက်လပ်ထဲသို့ထည့်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲဖတ်ပါ။ ယုံကြည်ပါ။ သခင်အား သင့်စိတ် နှလုံးထဲသို့ ဖိတ် ခေါ်ပြီး အသက်တာသစ်ကို ပေးရန်တောင်းဆိုပါ။
ကျွန်မဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ၊ ကျွန်မနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူအတွက် ကျွန်မရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် ဘယ်လောက် အရေးကြီးတာကို ကျွန်မ နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို ပြန်ရနိုင်မလား? မရနိုင်ပါ။ သင်၏အပျိုစင်မှုကို တစုံ တဦးအား တကြိမ်တခါသာပေးနိုင်ပြီး တကြိမ်ပေးပြီးပါက အပျိုစင်ဘဝကို ပြန်မရနိုင်တော့ပါ။ သင်သည် သင်၏ အပြင်ပိုင်း ခန္ဓာပိုင်းအရ အပျိုစင်မှု ပြန်မရနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်း အပျိုးစစ်မှု တနည်းအားဖြင့် အတွင်းပိုင်း စင်ကြယ်မှု ကို ပြန်ရနိုင်သည်။ ဤအရာကို ဒုတိယမြောက် အပျိုစင်ဘဝဟုခေါ်သည်။
ဒုတိယမြောက်အပျိုစင်ဘဝဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ယင်းမှာ လက်မထပ်ခင် အထိ နောက်ထပ် လိင်ဆက်ဆံ ခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ်မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ပြုမှုနေထိုင် ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သည့် ပုံစံအတိုင်း သင်ဖြစ်လာသည်။ သင်သည် ဤသို့သောရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ပြီး ရွေးချယ်မှုအတိုင်း ပြုမူနေထိုင်ပါက သင်သည် အရင်ကနှင့်ကွဲပြားသောသူတစ်ဦးဖြစ်လာမည်။
သင်သည် တကြိမ်တခါပင် လိင်ကိစ္စ၌ပါဝင်ပတ်သက်ဖူးပါက၊ ဆက်လက်၍ ဤကိစ္စအား လုပ်ဆောင် နေ လိမ့် မည်ဟု လူအချို့က ပြောကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်လုပ်ရမည့်အကောင်းဆုံးအရာမှာ ကွန်ဒုံးကို သင်နှင့် မကွာ ဆောင် ထားရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် လိင်ကိစ္စကို မငြင်းပယ်နိုင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု သူတို့ကဆိုကြသည်။ မမှန်ပါ။ သင်သည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အမှားတစ်ခုကို ပြုလုပ် မိခြင်းသည် ထိုအမှားကိုဆက်ပြုလုပ်နေရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သင်သည် ပါတီပွဲတစ်ခု၌ အလွန်အကျူး အရက်သောက်မိခြင်းက ဤကဲ့သို့ ပါတီပွဲတိုင်း၌ ဆက်လက်သောက်ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းလော့? မဟုတ်ပါ။
လိင်နှင့်ပတ်သက်၍ အမှားတစ်ခုအား ပြုလုပ်မိခြင်းက ဤသို့သောအမှားအား ဆက်လက်လုပ်နေ မည်ဟု ဆိုလိုခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သင်သည် ဒုတိယမြောက်အပျိုစင်ဘဝကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များစွာသည် ဤသို့သောရွေးချယ်မှုကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပြုလုပ်နေကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် ဘာကြောင့် ဒုတိယမြောက် အပျိုစင်ဘဝကို ရွေးချယ်ကြသနည်း?
အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ ကျွန်မလုပ်သောအရာဟာ မှားယွင်းကြောင်းကို နောက်ဆုံးမှာ နားလည်ပါပြီ။ အသုံးပြုခြင်းခံနေရတာကို စိတ်ကုန်နေပါပြီ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်၊ ကျွန်မဟာ အေအိုင်ဒီအက်(စ်) အပါအဝင် အခြားလိင်မှတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကိုလည်း ကြောက်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ခါးသီးတဲ့ သင်ခန်းစာကို သင်ယူခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မဟာ မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကို လည်း အထိခိုက်မခံချင်ပါဘူး။ ကျွန်မဟာ ဤကိစ္စကို မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင် ကျွန်မပေးရမည့်အဖိုးအခဟာ ကြီးမားပါတယ်။
ယေရှုအား သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အံ့ဖွယ်ကောင်းမွန်သော အရာ တစ်ခုကို ဘုရားသခင်က ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းမှာ သူကသင့်အား လူသစ်အဖြစ် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည် သူသည် သင့်အတိတ်ကို ဖျက်ရန်အတွက် Delete ခလုတ်ကို နှိပ်သည်နှင့်တူသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်၌ လူသစ်တဦးဖြစ်လာသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ မျက်စိတော်ရှေ့၌ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူဖြစ်သည် ““လူမည်သည်ကား၊ ခရစ်တော်၌ ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတိုပသည် အသစ် ဖြစ်ကြ၏”” ၂ကော ၅း၁၇
၁။ လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သောအချစ်ကို သေချာပေါက် သိရှိခံစားနိုင်မည်။
၂။ သင်သည် အခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံပါက သင်၏အိမ်ထောက်ဖက်အား သင်၏၁၀၀% အပြည့်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် သင်၏မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးလေးစားသောစိတ်ကို ထိခိုက်လိမ့် မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် တစ်ဘဝစာအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
၅။ လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
၆။ လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။
၇။ မလိုချင်သော ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မဟုတ်ပါ။
၈။ လက်မထပ်မီဆက်ဆံခြင်းသည် သင်နှင့်လက်ထပ်ရန်အတွက် သင့်တော်သောသူကို ရွေးချယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း ကောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၉။ လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် သင်၏အိမ်ထောင်ရေးကို ပြိုလဲစေနိုင်သည်။
၁၀။ လက်မထပ်မီ ဆက်ဆံခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်က ဤအရာသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်
Bible Study, Understanding True Love
« သင်ခန်းစာ (၂) ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးအစား (၃) မျိုး
သင်ခန်းစာ (၄) လိင်၏တွန်းအားကို နားလည်ခြင်း »
ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ကရုဏာတရားကို ရှာသောသူသည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ဂုဏ် အသရေထင်ရှားခြင်းကို တွေ့တတ်၏။
Proverbs 21 : 21 JUDSON